Hotels na New York, ezigbo nhọrọ dị ọnụ ala | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | ulo, New York
New York Ọ bụ obodo nwere nnukwu ụlọ nkwari akụ, nke ụdị, ụdị na ọnụahịa niile. Na ego ị nwere ike ịnwe ọmarịcha oge na ụlọ oriri na nkwari akụ ise nwere nnukwu echiche banyere Central Park, n'ezie, mana olee ebe ị ga-aga ma ọ bụrụ na ị bụghị Rockefeller?
Taa, anyị na-enye gị nhọrọ nke ezigbo ụlọ oriri na ọ hotelsụ inụ na New York na ọ bụ ezie na a naghị enye ha, ha na-echekwa nke ukwuu ezi mmekọrịta dị n'etiti ọnụahịa na mma. Chọsie ike!
Hotels na New York
Ọ bụrụ na ị bụ onye njem na-eto eto, ihe dị egwu, ihe hipster, ejiji, mgbe ahụ ị nwere ike ịnwale ụlọ nkwari akụ a nke bụ otu n'ime ndị okenye na obodo. Ọ gbasara HotelN’oge na-adịbeghị anya, ejiri ụdị ihe eji achọ mma, chandeliers, brik n’ime ya, ala osisi siri ike, na nkasi obi.
Hotellọ nkwari akụ a bụ obere ije site na SoHo, East Village, Little Italy, Nolita na Bowery ka anyị ghara ime mkpesa. O nwere WiFi, mmanya, ụlọ nri na ise ụlọNke kachasị elu bụ Regency Plus nke nwere mita 400 ma ọ bụ maka ihe ruru mmadụ ise. Ha enweghi miniibar ma ha nwere ogwe di nma akporo Randolph with a biya saloon Ihe magburu onwe ya n’elu ala nke na-enyekwara ndị na-agba ohi na sandwiches nri.
Ugboro abụọ malitere na $ 182 na oge dị ala ruo 320 na nnukwu oge. WiFi na-akwụ ụgwọ iche iche. Adres bụ 341 Broome Street.
Nhọrọ nke abuo anyi bu Moxy na Times Square, ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọ n'obi nke ihe nkiri ahụ, Midtown. Hotellọ nkwari akụ a dị na Seventh Avenue, na nkwụsị na 36th Street, tinyere District District na Times Square. Nwere ihe karịrị Roomslọ iri isii na asaa, obere, nke kachasị ibu ụlọ studio. Ma ha dị jụụ ma bụrụ ndị ụlọ ọrụ na-ewu ewu akpọrọ Yabu Pushelberg mepụtara.
Agba ndị na-anọpụ iche, ụfọdụ ihe na-emetụ n'ahụ, telivishọn n'ime ha niile, mmiri ozuzo, ụlọ mmanya n'okpukpu nke abụọ nke na-enyekwa nri na teres mmanya ikiri anyanwụ dara na New York ma ọ bụ rie nri ụtụtụ n'ụtụtụ. Partbụ akụkụ nke Marriot yinye na ọnụego amalite na Dollar 176.
Nhọrọ nke atọ bụ Hotel Alof, na Ogbe Ndịda Manhattan, mara mma. Ọ dị n'etiti William na Nassau n'okporo ámá na Financial District, n'ihi ya ị nwere ike ịga ije na Okwu Trade Center ma ọ bụ Wall Street ma ọ bụ East River boardwalk na-erughị 15 nkeji.
Ọ nwere Ime ụlọ nke oge a ya na ihe ndi di nkpa (oche, igwe onyonyo, onye na eme ya kọfị, nchekwa, mmiri na-ekpo mmiri na draya ntutu) Ha enweghị minibar, akwa dị mma na ụlọ ụfọdụ nwere echiche dị mma. O nwere obere mmanya, azu azu, mgbatị ahụ, ebe azụmahịa, na ebe a na-eri nri elekere 24. Ihe ọ na - enweghị bụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ mana enwere ike ịnye ya iwu n'èzí site na ọrụ ya nke a na - akpọ Butler.
Uzo abuo na-amalite na $ 140 kwụsịrị oge ruo 260 na nnukwu oge. Nri ụtụtụ bụ nhọrọ ma dị n’etiti $ 10 na $ 20 kwa onye. WiFi bụ n'efu. adreesị bụ 49-53 Ann Street.
Nwee aka dị na Flatiron District ma bụrụ a mix nke ụlọ mbikọ na nkwari akụỌ, ihe mara mma nke amụrụ na Miami wee NYC. Ọ na-arụ ọrụ na nkwari akụ ochie, George Washington, nke eweghachitere kpamkpam wee gbanwee ka ọ bụrụ nke dị jụụ na nke dị jụụ nke ị gaghị akwụsị ịse foto.
Ime nhọrọ ime ụlọ gụnyere akwa akwa, eze, akwa eze, na ime ụlọ maka mmadụ atọ. E nwere ụlọ oriri na ọ restaurantsụ twoụ abụọ, Simon & The Whale na Studio, maka nri ehihie na nri abalị, na cafe a na-akpọ Simle na Go maka nri na ịpụ. Ọnụego amalite na $ 113.
Likemasị gị Brooklyn? Mgbe ahụ i nwere ike ịnwale Ulo-nkwari Ulo, nke na-arụ ọrụ n'ime ụlọ obibi na Smith Street, saịtị na-enye ohere dị mfe maka agbata obi dị ka Cobble Hill, Park Slope ma ọ bụ Prospect Heights. Nke a na-abịa naanị site na nkeji iri site na Brooklyn Bridge na nso ụzọ ụgbọ oloko. Ọ bụ obere ụlọ nkwari akụ nwere kichin mepere emepe nke na-eri nri ụtụtụ kwa ụtụtụ ma na-ewe tebụl ya n'èzí n'oge ọkọchị.
Ime ụlọ ndị ahụ nwere mmetụta dị ka ụlọ elu, ha dị mfe, na-atọ ụtọ ma nwee ọtụtụ nkụ. Enwere free anyịnya igwe, mgbatị elekere 24, WiFi na ọrụ ime ụlọ. Nwere Ime ụlọ 93s na oke ime ụlọ buru ibu ma e jiri ya tụnyere ihe ị na-ahụkarị na Manhattan. Enwere ụlọ nwere akwa abụọ, akwa ahịhịa na ọbụlagodi nke nwere hammock.
Naanị nri ụtụtụ ka a na-enye. Gwọ Site na $ 149 maka ime ụlọ abuo na oge dị ala na 379 na nnukwu oge. WiFi bụ n'efu. Adres bụ 85 Smith Street, Brooklyn.
Terra na-amasị gị? Mgbe ahụ ị nwere ike ịkwaga Soho wee nọrọ na Arlo Soho kwuru. Ọ na-enye obere ime ụlọ, 325 na mkpokọta, mana ejikere nke ọma yana ọrụ zuru ezu. Enwere ọtụtụ nhọrọ, na teres, na akwa akwa, na echiche nke obodo ... Ma n'ezie, ụlọ nkwari akụ ahụ bara uru na mbara ala o nwere, nnukwu, ebe ọ na-egosi onyinyo kachasị mma nke oasis mepere emepe na i nwere ike iche.
Ime ụlọ nwere minibar, ihu igwe dị larịị, tebụl na WiFi. Enwekwara ebe a na-anabata ndị ọbịa na patio mara mma nke na-agbakwunye na mbara ụlọ. E nwekwara a 24-hour ahịa n'ime. Startlọ malitere na $ 149. emi odude ke 231 Hudson Street, SoHo.
The yinye si Netherlands, Enmụ amaala, ị nwere ụlọ nkwari akụ gị ebe a na New York. Ọ bụ maka echiche «Inweta okomoko«. Lọ nkwari akụ ahụ nwere ala 21 ma mepee na 2014. Ọ na-enye 230 obere ụlọs mana nkasi obi, nwere oche Switzerland, a mmanya na panoramic echiche na Ofel, ụlọ oriri na ọ cafụ cafụ na-emeghe 24 awa n'ụbọchị na ọnọdụ dị egwu.
Ime ụlọ abụọ nwere ọnụahịa site na $ 170. Hotellọ nkwari akụ ahụ dị na 218, West 50Th Street.
N'ikpeazụ, ụlọ nkwari akụ ọzọ dị na Brooklyn: nke Ọbụna ụlọ nkwari akụ. Ọ bụ ihe gbasara a nkwari akụ dị jụụ, nwere oghere iji zuru ike ma ọ bụ rụọ ọrụr, ya na egwuregwu na akwukwo. Enwekwara studio maka yoga ma ọ bụ klaasị na-atụgharị uche. Ọ na-enye WiFi, ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, ọrụ ime ụlọ na n'ime ụlọ dị mma, ngwaahịa ịsa ahụ, spa ịsa ahụ na obere mmanya.
Site na ụlọ ndị dị n'elu ala, echiche ndị ahụ agaghị akụda mmụọ. Amen na n ’ala nke asaa, e nwere oghe ghere oghe N'ebe obibi mara mma, ihe dị egwu na-atụle na ọ bụ New York.
Ugboro abụọ nwere ọnụego site na 195 dollar na obere oge ruo 305 na nnukwu oge. Nri ụtụtụ dị iche iche ma ọ na-efu $ 20 na $ 30 kwa onye. ENlọ nkwari akụ EVEN dị na 46 Nevins Street, Brooklyn.
Ọ gaghị ekwe omume inyocha ihe niile Yorklọ nkwari akụ New Yorkk, enwere ọtụtụ nhọrọ, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịmaba na ntanetị na-achọ nke gị, ị nwere ike ịmalite site n'ịtụle nhọrọ ndị a dịgasị iche. Kechioma!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » New York » Hotels na New York, ezigbo nhọrọ dị ọnụ ala